ကောင်းကင်ကို: သင်္ကြန်မတိုင်ခင် ကျတဲ့မျက်ရည်
Posted by Kaung Kin Ko at 4:32 PM
အကိုရေ တော်တော် ကောင်းတယ်ဗျာ။ ကဗျာက ဖတ်ရတာ ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကတော့ တမျိုးကြီး ဖြစ်သွားတယ်ဗျ။ မောသွားသလိုပဲ။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အကို့ ကဗျာတွေကတော့ လတ်ဆတ်ချိုမြိန်ဆဲပါပဲ။
ညည်းချင်း ရေးဖွဲ့တဲ့နေရာမှာ ဦးကြင်ဥက ဘဘ ဘဘ ခေါ်လောက်သည်။
စည်တဂျားလောက် သောက်ချင်တယ်” ဆိုပါလား။
(တို့လဲ) တိုက်ဂါးဘီယာ သွားမော့တော့မယ်။
ထုံးစံအတိုင်း စကားလုံးတွေပြောင်မြောက်ပြီး ရည်ရွယ်ချက်တွေ ထိရောက်တုန်းပါလား အစ်ကိုရေ...။ နှစ်သစ်ကို ယုံကြည်ချက်အသစ်၊ မျှော်လင့်ချက်အသစ်၊ အိပ်မက်အသစ်တွေနဲ့ ကြိုဆိုကြရအောင်လား :)
ကဗျာလေး လာဖတ်သွားတယ်။ ကဗျာလည်း ဆုံးရော ရင်ထဲမှာ မောသွားတာပဲနော်။ စည်တစ်ဂျားတောင်ဆိုတော့ မများဘူးလား ဆရာရေ။ တစ်ခွက်၊ နှစ်ခွက်ဆို တော်ရောပေါ့။ :P
ကဗျာဖတ်ပြီး ဘာပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး အကိုရယ်...သေချာတာတော့ မြန်မာနှစ်ပဲကူးကူး၊ အင်္ဂလိပ်နှစ်ပဲကူးကူး စိတ်ထဲက ဒဏ်ရာဟောင်းတွေက သေရာပါနေဦးမှာပါပဲ။ ခေတ်အသစ်ကို စနိုင်တဲ့တစ်နေ့မှာတော့ ဒီခံစားချက်တွေ လျော့ပါးသွားနိုင်ကောင်းပါရဲ့နော်...ခုတော့ ခေတ်ဟောင်း၊ စနစ်ဟောင်းတွေထဲမှာ နှစ်သစ်ဆိုတာလဲ .............။
အကိုရဲ့ ဒေါသတွေ မာန်မာနတွေကို ကဗျာလေးမှာ အပြင်သရုပ်ပေါ်အောင် ခံစားပီး ရေးထားတာကို သိသာစေတယ်ဗျာ။ အရမ်း လန်းတဲ့ကဗျာလေးပဲ။ တချို့အချက်တွေကို တော်တော်သဘောကျတယ်။ ဘာတဲ့... date သာ ပြောင်းတဲ့ ဘာဆိုလား အဟားဟား။
ထပ်တရီ လေးစားပါတယ် :)
ကဗျာက တကယ်ကောင်းတာပဲ။ လူတိုင်း လူတိုင်းရဲ့ ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ အကြောင်းတွေ ခံစားချက်တွေကို အစ်ကိုက ကဗျာတစ်ပုဒ်တည်းနဲ့ပုံဖော်လိုက်သလိုပဲ။ အရမ်းကိုထိတာပဲ။
မျက်ရည်တွေ ဖလားထဲထည့် ပက်ကြမယ့် သင်္ကြန်။
အကို ကောင်းကင်ကို !
မိုးခါးရေတောင် အလကားသောက်လို့ မရဘူးတဲ့လားဗျာ ...ခံစားချက် အပြည့်ပါတဲ့ ကဗျာလေးပါ အကယ် ကိုကောင်းတယ်ဗျ အဆင်ပြေပါစေ...:)
ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်းမင်း စာအုပ်တစ်အုပ်ကို အားတင်းဖတ်နေတဲ့သူဟာ
ဘာစာအုပ်လဲ နာ့ကိုလဲ ရှဲပါဦးအေ
သင်္ကြန်မတိုင်ခင် ကျတဲ့မျက်ရည်တွေ နာ့သင်္ကြန်ရေနဲ့ ရောပြီး ပျော်ရွှင်ပါစေလေ
အကြိုရေပက်သွားတယ် ပြန်မပက်ရ သင်္ကြန်မကျသေး ငရဲကြီးတတ်တယ် :P
ကဗျာလေးကောင်းတယ်ဗျ အပေါ်မှာ စတာတွေ စိတ်မဆိုးနဲ့
Wonderful job :D i see this's not ur masterpiece, ur impressive and attractive poems will come out. To me, i feel myself as if i lost all everything i have, i don't know why. Then, BKK weather is too hot and i get bore staying here.
Anyway, i do proud of wonderful job which is praised by readers. Keep it up :)
မပြောင်းလဲချင်း သည် ပြောင်းလဲချင်း ဆို တဲ့ နိယာမ တရား ဟာ
ကျနော်တို့ အား လုံး အတွက် ပြောနေသလိုဘဲ........
နှစ် လ ရာသီ အလီ လီ
ဘယ်လို ပင် ပြောင်း ခဲ့ ပြောင်း ခဲ့
်တို့တွေ အား လုံး အသက်တွေကြီး ခဲ့ ပေမဲ့
မပြောင်းလဲ တဲ့ နုပျို လှ ပ
အမြဲ ကြုံ တွေ့ ရ
ဒို့ ဒုက္ဒ က... လွတ် ရာ နတ္ထိ